7 Zvakajairika Kukanganisa MuUAE Arbitration Mutemo | Arbitration Magweta UAE
7 Zvakajairika Kukanganisa MuUAE Arbitration Mutemo
Yakanakisa Arbitration Mutemo Makambani muDubai
Arbitration Mutemo muUAE
Kukura uye kudyidzana kwepasi rose kwemuchinjikwa-muganho wekushambadzira uye kutengeserana muAFA zvakazvisimbisa senzvimbo yekubatana yebhizinesi, investor, uye zvido zvehurumende. Sezvineiwo, humwe hwehukama uhwu hunoputsika, uye mapato anobva atarisa kune nzira dzakanakisa dzekugadzirisa kusawirirana kwavo. Muzviitiko zvakawanda, ndiko kupokana.
Sisitimu yepamutemo uye yekumisikidza yeUAE inobvumidzwa yakasarudzika uye yakaoma, iine onshore uye kumahombekombe, mutemo wehurumende uye zvakajairika mutemo masimba, uye mafambiro mune zvese Chirungu neArabic.
Kune mapato ari kutsvaga kugadzirisa kusawirirana kuburikidza neAU's arbitral sarudzo, huwandu hwesarudzo uye kufunga kwekuita kunogona kutyisa. Kunyangwe ichipa rondedzero yezviitiko pamwe nesarudzo, zvakare inovimbisa mukana wekukanganisa.
Icho chikonzero ndechekuti hazviwanzo kuitika kuti mapato anomhanyira mukati uye kuburikidza neichi chiitiko nekusashivirira kumwe chete kwakatungamira mukukakavadzana pakutanga. Kukanganisa kunogona kuitika mune chero nhanho uye zvinhu zvinoumba arbitral maitiro, kubva kuchikumbiro cheMubvunzi chekutongwa, maitiro ekuteerera, kuburitswa, zvirevo zvezvapupu, kunzwa, uye mubairo wekupedzisira.
Imwe neimwe yematanho ekupokana ine misungo yakajairika iyo inobata vazhinji vakaurayiwa, ndosaka chidimbu chakadai chichiita senge chisina kukwana. Zvisinei, isu tinoratidzira (pasina kurongeka) zvimwe zvekukanganisa kunoitwa mundima dziri pazasi; uye nekupa matanho anoshanda ekuti ungadzivise sei.
Zvakajairika Kukanganisa muUAE Arbitration
Tarisa zvikanganiso zvakajairika pazasi mune arbitration process, kubva pakunyora arbitration zvibvumirano, masimba, arbitration mibairo, uye kuita.
1. Kupa Simba Rekubvumirana Kupokana
Mutemo weUAE pachinyakare unogadza kuti mukuru wechikoro anofanira kupa masimba akasarudzika kumumiriri pamberi pekuti mumiriri agone kumisikidza mukuru wechikwereti muchibvumirano Iwo mutemo unoda kuti mukuru wechikoro ataure zvakajeka muchibvumirano chemumiriri kuti mumiriri ane simba rekupinda muchibvumirano chekumiririra akamiririra ivo.
Zvikasadaro, kune chaiko njodzi yekuti chibvumirano chekuyananisa muchibvumirano hachina basa uye hachimanikidzike. Izvo hazvina basa kuti mumiriri aive nemvumo yekusaina kondirakiti achimiririra mukuru wechikoro (asi kwete chaizvo chibvumirano chekumisikidza chiri mukati mayo). Mutemo weArbitration unoenderera mberi uchiratidza izvi sevhu rekukwikwidza mubairo wekupokana. Makambani epasi rese nedunhu anowanzo kuregeredza zvinodiwa zviri pamutemo zvichitungamira kumhedzisiro.
2. Kumisikidza Chikamu Chekupokana
Hukama hwepedyo pakati pechiitiko chekuyananisa uye chikamu chekuyananisa muchibvumirano chinoita kuti ive nyaya inonetsa kwazvo. Kukanganisa kudiki mukunyora kunogona kutungamira kune zvisingakoshe mitengo uye kunonoka kana kunyange kurwira mudare pamusoro pekuvapo kwechibvumirano chekududzira chirevo chakadai. Zvimwe zvezvikanganiso zvakajairika nezvikamu zvinosanganisira;
Kupa mapfupi mafupi madare ekumatare,
Kutumidza nzvimbo kana mutongi kuti aite uyo asipo kana akatumidzirwa zita kana kuramba kuita,
Kugadzira chirevo chisina kukwana,
Kuisa miganhu isingazivikanwe pachiyero chechirevo, et cetera.
Arbitration inyaya yechibvumirano, uye pane zvakadzama zvinyorwa izvo munhu anogona kubvunza pakunyora arbitration clause. Akaverengeka modhi arbitration zvikamu zvakasimudzwa ne ICC, LCIA, ICDR UNCITRAL, uye DIAC zviripo zvekushandisa. Izvo zvinomisikidzwa nemaune muchimiro chepuraimari (kugadzirisa mamiriro ezvinhu akasiyana) uye inofanirwa kushandiswa mune iyo fomu pasina kuigadzirisazve.
3. Kushandisa Zvisizvo Kufungisisa kweZvapupu
Izvi zvinowanzoitika kana magweta achiedza uye achibvunzurudza kuratidza nyaya yavo mumusoro kana kutadza kuronga kubvunzurudzwa pamberi pokunzwa. Kubvunza-muchinjikwa zvakare chimwe chezvishandiso zvine simba kwazvo zvinowanika kuraira panguva yekutongwa, asi magweta:
bvunza mibvunzo yakavhurika pakubvunzurudzwa, uchibvumira chapupu chinopokana kuti chitaure "chake" chikamu chenyaya,
vanoshandisa kubvunzurudza kuratidza nyaya yavo-in-chief,
kutambisa nguva pakubvunzurudza kunonetsa kupokana nejot imwe neimwe pakuongorora kwakananga kwefakazi, kunyanya pazvinhu zvisina basa.
Zano rinoshanda kwazvo pano nderekugadzirira nyaya yako zvakanaka. Ziva zvaunoda kuwana kubva kuchapupu, ita pfupi uye unamatire pairi. Kunze kwechiitiko chisina kujairika, ndokumbira upikise muyedzo wekubaya chapupu kwemaawa pane zvese zvaakataura.
4. Kutambisa mikana yekukurudzira Mutongi / dare redzimhosva
Avo vanoita kukanganisa uku vanowanzozviita nekufungidzira kuti muyananisi anogovera ruzivo rwavo rwenyaya; kutadza kuongorora uye kuronga nyaya yavo; uye kufaira kwenguva refu, mabhegi asingafadzi.
Mapfupi anofanirwa kuve akananga uye mapfupi sezvinobvira. Kunyangwe kana arbitrator asingaise muganho wepeji pane zvipfupi, zvakanakisa kuenda kune federal, nyika, kana mipendero mipfupi yemuno senhungamiro. Zvakare, edza kuramba uchinzwa pfupi ipfupi pane mapeji makumi matatu.
5. Kusakosha kweMitambo
Nepo kumwe kukwikwidzana kuchida iwo akafanana maziso echiso sekumhan'arira, mamwe magweta anoshandisa hardball matekiniki, kufuratira, uye kunonoka kazhinji uye nekukuvadza kwavo. Aya magweta kazhinji:
Ramba kushandira pamwe mune chero chinhu,
Zvinopesana nezvose zviratidziro zvinopihwa panzeve nedare,
Pakarepo "tsvaga" kuratidzwa kwakakosha pakunzwa,
Rongedza kuiswa pamwe unilaterally.
Arbitration, sekumhan'arira, inzira yekupikisa; izvo, zvakadaro, haisi rezinesi rekuregeredza hunyanzvi nehunhu uchifarira kurova chipfuva uye kusabatana. Zvakanakisisa kuronga zvawakawana uye nekukurudzira chirongwa chekuwanana chinowirirana zvine zvido zvemapato uye nenyaya yacho.
6. Kufunga Kuti Mitemo yeUchapupu Kuti Ive Yakafanana Neiyo iri muDare
Nehurombo, zvakajairika kuti magweta anokundikana kutora nguva kuti vanzwisise mirau yehuchapupu; uye kuita zvinoshaya humbowo kuramba. Kazhinji, iyo humbowo mitemo inoshanda kumatare edzimhosva haisunge Arbitration kutongwa. Zano rinofanira kuziva kuti pane mitemo ipi uye ita maererano nayo.
7. Kukundikana Kuitisa Zvakakodzera Kushingairira paMutongi
Zvakanakisisa kuziva arbitrator ako ehunyanzvi kumashure uye nhoroondo yebasa; ziva izvo zveumbowo hunodiwa, uye gadzirira nyaya yako maererano. Enderera nesarudzo yako kana iwe uchigutsikana kuti muyananisi inyanzvi pane yako indasitiri indasitiri kana yakatarwa zviri pamutemo nyaya dzinounzwa nenyaya yako. Zvakakoshawo kuti iye munhu akangwara anowanzo "edza" nyaya zvisati zvaitika, kana zvisiri sekumutonga saka segweta.
tsvaga Nyanzvi Yezano kubva kune Redu Ruzivo Rekugadzirisa Nyanzvi
Pane zvakawanda zvisirizvo munzira yekugadzirisa basa uye izvo zvinotarisirwa mubato. Arbitration inzira yepamutemo iyo inofanirwa kuve kutsiva kwematare. Iyo arbitration maitiro mune chero masimba anotonga akawoma zvakakwana kuti ade kuongororwa kwakaringana pazvinhu zvese uye nhanho dzekupokana, zvingave zviri zvepamutemo kana zvisina kurongwa. Kazhinji, kutarisirwa kunodikanwa kune ruzivo chinhu chinoratidzika atypical kune nyanzvi uye vane ruzivo vezvemitemo.
Arbitration mutemo chikamu chakakosha kwazvo che chero bhizinesi kana hwekutengesa hupenyu, kunyanya muAFA. Basa remutongi rinokosha mukumhanya kwakanaka kwebhizimusi chero ripi zvaro, kunyanya panomuka nyaya dzekutengeserana. Gadzira sarudzo dzako dzepamutemo wobva washandisa masevhisi eAmal Khamis Advocates kugadzirisa gakava ripi neripi raungave uine rimwe bato.
Amal Khamis Advocates inzvimbo inotungamira yemutemo inosimbisa arbitration, mediation nedzimwe nzira dzekugadzirisa kusawirirana muDubai, UAE. Isu tine ruzivo rwakanyanya rwekupokana uye magweta muUAE. Bata nesu nhasi!